March 3, 2018 – HORNAFRIC MEDIA
Ruushka Oo Ku Baaqay In La Xoojiyo Ciidanka Somaliya
Posted on March 3, 2018 by Queen Kiin
Wasiirka arrimaha dibadda Dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in loo baahanyahay taageero rasmi ah oo la siiyo Ciidamada dowladda Somaaliya iyo kuwa AMISOM si looga adkaado Al-shabaab. Wasiir Sergey Lavrov,waxaa uu wareysi siiyay Wargeyska The Reporter ee Dalka Itoobiya,waxaana uu ka wax ka weydiiyay xaaladda Soomaaliya. Mr Sergey Lavrov,ayaa sheegay in howlgalka AMISOM uu muhiim u yahay amaanka Soomaaliya sidoo kalena loo baahanyahay in xoogga la saaro dhismaha Ciidamada Soomaalida ah. “Xaaladda siyaasadeed iyo…
Yaa Masuul ka ah in Dekedda Berbera iyo kuwa kale ee dalka si sharci daro ah loola wareego ?
Xukuumadda Dowlada Federaalka Soomaaliya ee ay hoggaamiyaan Madaxwayne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Raysal wasaare Xasan Cali Khayre ayaa leh masuuliyada ugu weyn ee hantida iyo ilaalinta xuquuqda shacabka Soomaaliyeed leeyihiin sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka. Somaliland waxay heshiis la gashey shirkada Dp World ee laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta Bishii August 2016, Maamulkii markaasi xukumay hogaanka Dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cumar Cabdirashiid ayaa lagu eedeeyay inay heshiiskaasi qeyb ka…
War Saxaafadeed laga Soo Saaray Shirkii Arimaha Soomaaliya ee Kampala
War-murtiyeed ayaa laga soo saaray shirka Madaxda Dalalka Ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya (AMISOM) iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka dhacay 2-da Maarso 2018 magaalada Kampala ee Uganda, kaas uu martigeliyey Madaxweynaha Uganda Mudane Yoweri Kaguta Musaveni. Shirka waxaa kasoo qeybgalay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Uganda Mudane Yoweri Kaguta Musaveni, Madaxweyne Kuxigeenka Koowaad ee Burundi Mudane Gaston Sindimwo, Wasiirka Difaaca Kenya Marwo Raychelle Omamo, Wasiirka Difaaca Jabuuti Mudane Ali Hassan Bahdon,…
R/Wasaare Khayre oo u amba baxay Mareykanka iyo ujeedka Socdaalkiisa.
Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo R/wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa goor dhow oo fiidnimadana ah ka amba baxay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho,iyagoo ku sii jeeda Dalka Mareykanka si ay uga qeybgalaan shir ka dhacaya magaalada (Washington DC). Waxaa kamid ah wafdga ra’iisul Wasaaraha xubno ka tirsan Golihisa Wasiirada iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya. Ra’iisul Wasaare Khayre iyo wafdigiisa ayaa ka qeybgalaya shir looga hadlayay arrimaha wadamada soo koraya ee…
Daawo Sawirada Amisom oo soo bandhigtay Jabkii kasoo gaaray dagaalkii Balcad .
Ciidamadii AMISOM ee ku dhaawacmay weerarkii ay Alshabaab ku qaaday Kolonyo ay galbinayeen ciidamada AMISOM ayaa la geeyay Magaalada Muqdisho. Ciidamadan oo u dhashay dalka Brundi ayaa la dhigay Isbitaalka Heerka labaad ee AMISOM, magaalada Muqdisho, waxaana isbitaalka AMISOM ku ku booqday ku xigeenka madaxa Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo. AMISOM ayaan shaacin ilaa iminka qasaaraha ciidamadooda kasoo gaaray weerarka oo ka dhacay Jimcihii duleedka degmada Balcad, dowladda Brundi ayaa sheegtay in shan askari…
Nin Hubeysan oo isku hor toogtay Aqalka Cad ee Mareykanka iyo Wararkii ugu danbeeyay
Wararka laga helayo magaalada Washington ayaa sheegaya in nin hubeysan uu isku hor toogtay Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanka, caasimadda Washington. Rasaas ayaa laga maqlay bannaanka Aqalka Cad, taasoo keentay xaalad degdag la geliyo Aqalka Cad oo la xiray in laga baxo ama la galo, waxaana arrinta la wareegay ciidamada gaarka ah ee ilaalada Aqalka Cad. Daqiiqado kadib ayaa la shaaciyay in qof dhaawac culus kasoo gaaray rasaas uu isagu adeegsaday meel u dhow…
Xukuumada Hargaysa oo ka jawaabtay hadalkii RW Khayre…Daawo
Posted on March 3, 2018 by Kaafi
https://www.youtube.com/watch?v=2ffaECB3vzA	Read More
Faysal CW oo RW Khayre ku sheegay Cawsle aan horay wax u Xukumi Jirin…Daawo
https://youtu.be/yBawceOCZWo?t=4m10s	Read More